Collabora akavandudza mutyairi weWayland weWine uye ikozvino inowirirana neVulkan | Linux Vakapindwa muropa
Pakupera kwa2020 Collabora akazivisa zvinangwa zvekugadzira mutungamiriri weWine kuitira kushanda neWayland, kubvira paLinux, Waini inoshandisa X11 kudyidzana neiyo X11 inoratidzira server. Mune akawanda masisitimu emazuva ano iyo Wayland protocol iri, nekugadzirwa, yakanyanya kutemerwa kana ichienzaniswa nemamwe echinyakare masisitimu ekuratidzira senge X11 uye win32, ichiratidza yakasarudzika seti yematambudziko mukubatanidza Wayland neWine.
Mwedzi mitatu mushure meizvozvo, Collabora akapa yekutanga yekuvandudza yeiyo controller mune izvo zvigadziriso zvakaratidzwa raive basa rekudaira pakati peWine neWayland mune yakakosha zvakanyanya, kunyangwe hazvo mutungamiriri akaunza zvikanganiso zvakawanda uye kunyanya nekukwirisa kwemahwindo.
Kwemwedzi mishoma yapfuura, tanga tichivandudza muedzo weWayland mutyairi weWine, iyo inobvumidza Windows kunyorera kumhanya zvakananga muVanyori veWayland. Chinangwa chedu ndechekupedzisa kubvisa kudiwa kweXWayland kune akawanda mashandisirwo emamiriro uye nekudaro kudzikisira kuomarara kwesisitimu uku tichibvisa poindi dzekusagona kushanda.
Zvino mushure memwedzi ingangoita minomwe yebasa vhezheni yakagadziridzwa yaiswa yeWayland mutyairi iyo inobvumidza kumhanya kunyorera uchishandisa GDI uye OpenGL / DirectX kuburikidza neWine zvakananga munzvimbo yeWayland-based, usingashandisi XWayland dura uye kubvisa waini inosunga kune X11 protocol.
1 Nezve iyo nyowani vhezheni yemutongi
2 Vaka murongi
Nezve iyo nyowani vhezheni yemutongi
Mune iyi vhezheni itsva Vulkan rutsigiro rwunounzwa uye zvakare inouya nemawindows manejimendi kubata pamwe neshanduko yesaizi, yakazara skrini, kudzikisira, pakati pezvimwe zviito haisisiri dambudziko, kuwedzera pane izvo uye inogona kushandiswa zvakananga kana kuita Direct3D kuburikidza neWineD3D kana DXVK.
Vanogadzira Collabora vanotaura nezve mutungamiriri weWayland ikozvino ine rutsigiro rwekushanda pane akati wandei monitors kuWine uye inotsigira ine simba yekuwedzera uye kubviswa kwevatariri. Iyo zvakare inotsigira kushandura iyo app-inoonekwa resolution yeumwe neumwe mutariri (kuburikidza nemunyori kuyera, ona inogadziridza pamusoro) kuita yega-yekutarisisa maitiro shanduko.
Mukuwedzera kuchinja resolution uye maitiro eimwe nereki inotsigirwa uye kuyera HiDPI uye kushanda nehupamhi pixel density (HiDPI) inoratidzwa inopihwa.
Chekupedzisira, zvinotaurwa zvakare kuti kubata kweakarongwa maratidziro kwave kuitiswa muWayland uye rutsigiro rwekutema uye rwunoenderana rwekuratidzira kufamba rwakawedzerwa.
Neiyi vhezheni nyowani mutungamiriri ari kuswedera padhuze nekuve anoshandisirwa kushandiswa kwakawanda, kuwedzera kune iyo nyaya yekuti kutaurirana nevagadziri veWine vanoenderera mberi nenyaya yekusanganisira Wayland rubatsiro mubazi rewaini reWine nekuzotevera kuchinjisa kune chikuru chimiro cheWine.
Nezvo Alexandros Frantzis (Collabora mushambadzi) akagovana:
»Ini ndinofunga mudzvanyiriri asvika padanho rine zvimiro zvakakwana zvekubatsira kune akawanda mashandisirwo emamiriro uye zvakare inopa kuvimba kwakaringana kuti ndiyo sarudzo inoshanda mune ramangwana. Zano rangu parizvino rakanangana nekutarisa kugadziridza / kusimudzira uye kutanga kugadzirira staging nekugadzira akateedzana eakawanda ekudzokorora-ane hushamwari / akakwira mapeti seti. '
Kune avo vanofarira kugona kuwana, kuvaka uye / kana kushandisa Wayland mutyairi weWine, vanofanirwa kuziva kuti zvinodikanwa kuve neWayland yakaiswa pamwe newayland-mutengi, wayland-egl uye xkbcommon budiriro.
Kuvakwa kwemutongi kunogona kuitwa nekuvhura terminal uye mairi vanozonyora inotevera mirairo:
Kuti udzidze zvakawanda nezve maitiro ekubatanidza kana kuwana kodhi kodhi, unogona kuzviita Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Collabora akavandudza mutyairi weWayland weWine uye zvino inowirirana neVulkan
Tichava neKudzidza Kwakadzika Super-Sampling paLinux?